Belavia ụgbọelu nke igwe na-adaghị adaba na-abanye na mberede na Moscow
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Belavia ụgbọelu nke igwe na-adaghị adaba na-abanye na mberede na Moscow
Airlines • Airport • Akụkọ Belarus • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ụgbọ elu ndị njem na Belarus jiri naanị otu injin na -arụ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu Domodedovo Moscow.
Boeing 737 ụgbọelu nke Belavia ji ọrụ zigara mgbama mberede n'elu Russia.
Ụgbọ elu ndị njem Belavia si Minsk na -aga Antalya, Turkey.
Enwere ndị njem 197 na ndị ọrụ asaa nọ n'ụgbọelu Belavia.
Ụgbọ njem Boeing 737 nke ụgbọelu ụgbọelu Belarus na -arụ Belavia, nke si Minsk, Belarus na -aga Antalya, Turkey, rutere na mberede na mberede na mberede Ọdụ ụgbọ elu Moscow Domodedovo mgbe izipu mgbaama mberede n'etiti ụgbọ elu.
Ndị ọrụ ụgbọelu Russia kwuru na "Ụgbọ elu Belavia B29215 si Minsk na -aga Antalya adala nke ọma na Domodedovo."
Dị ka akụkọ si kwuo, ụgbọ elu Belavia ji naanị otu injin na -arụ ọrụ rute n'ọdụ ụgbọ elu Domodedovo.
Na Mọnde, ụgbọ elu ndị njem Belavia Boeing 737 si Minsk na -aga Antalya zitere mgbaàmà mberede ka ọ na -efefe mpaghara Belgorod na Russian Federation.
Ụgbọ elu ahụ na -agafe Ukraine, na mgbe o zigachara mgbaama nsogbu, ọ gbadara wee buru ụzọ gbanwee gaa Voronezh wee banye Moscow.
Enwere ndị njem 197 na ndị ọrụ ụgbọ mmiri asaa.
Enweghị akụkọ ọnwụ ma ọ bụ mmerụ ahụ mgbe ọdịda mberede.